Root Cetilistat (Xaqiiji) budada (282526-98-1) hplc = 98% | AASraw
Cetilistat (Foosto) budo ah
/ Products / Xabbad dufan leh / Cetilistat (Oblean) budada
Rating: SKU: 282526-98-1. Category: Xabbad dufan leh
AASraw waxay ku jirtaa karti iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa amar guud ee Cetilistat (Obid) budada (282526-98-1), iyadoo la raacayo Xeerarka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
Cetilistat (Cunnada) Calaamadaha aasaasiga ah ee budada
Cetilistat (Oblean) wareega budada
Magacyada kiimikada: budada Cetilistat
Magacyada Noocyada: Foosto
Cetilistat (Oblean) isticmaalka budada
Cetilistat (Oblean) budada ah waa ka hortag ee lipase pancreatic, enzim oo jebiya triglycerides ee xiidmaha. Haddii aan lahayn enzimkan, triglycerides laga helo cuntada ayaa looga hortagi karaa in lagu nadiifiyo asiidh dufan oo bilaash ah oo laga helo oo laga tago si loo yareeyo. Daawadan, iyadoo la mid ah tan hadda jirta ee daawada daroogada ee loo yaqaan 'FDA-approved', ayaa laga yaabaa inay yeeshaan qulqulo dheeraad ah oo loo dulqaadan karo sababtoo ah qaab dhismeed oo kala duwan. Hal tijaabo ah 2 ayaa daraasad ku sameeyay 612 obese, maadooyinka sonkorowga qaba BMI of 28 ilaa 45 kg / m2 muddada daaweynta 12. Kiniiniyada Cetilistat 80 iyo 120 ayaa kor u qaaday miisaanka lumis weyn marka la barbar dhigo placebo (3.85 kg iyo 4.32 kg iyo 2.86 kg, siday u kala horreeyaan). Nooga miisaanka miisaanka loo yaqaan 'powder-to-loss' ayaa la mid ah miisaanka lumay oo la helay budada orlistat (3.78 kg). Budada Cetilistat ayaa si wacan u dulqaadanayay waxayna muujiyeen yaraanta joojinta sababtoo ah munaasabado qaraar ah marka la eego sanduuqyada iyo kooxaha budada ah. Iyadoo la tixgelinayo in joojinta ku jirta koox budada ah ama listat ay aad uga sii xumaatay 120 mg Daawooyinka budada ah iyo kooxada placebo, oo gebi ahaanba sabab u ahaa dhacdooyinka qaska ah ee caloosha, Cuntilistat budada waxay noqon kartaa lipase lipase inhibitor si loo gaaro miisaan lumis. Xaaladaha tijaabada 3 ee kalluunka ayaa hadda ku jira horumarka Japan.
Waa maxay qiyaasta budada ah
Iska xajin daawada budada loo isticmaalo waxaa loo bixiyaa sida 60mg xoogga xajmiga ah ee loogu talagalay maamulka hadal ahaan. Daawada waxaa la qaataa cuntooyin si loo hubiyo in ay shaqeyn karto inta cuntada la nadiifinayo, si ay u nuugto dufanka cuntada laga yaabo in si wax ku ool ah loo yareeyo. Dhakhtarkaaga ayaa kugula talin doona inta daawo qaadashada qiyaas kasta, iyo sidoo kale qiyaasta loo baahan yahay maalin kasta. Aad bay muhiim u tahay in aad adeecdo tilmaamahan. Ha ka qaadin wax ka badan dhakhtarkaaga oo kuu sheegaya inaad qaadato.
Sidee u shaqeeyaa budada Cetilistat
Kiniiniga Cetilistat waa budada miisaanka oo miisaanka loo isticmaalo oo lagu daro cunto kalooriye yar. Waxay ka shaqeysaa adoo joojiya xaddi badan oo dufan ah oo ka timaada in la dheefshiido oo lagu nuugo jirka. Dufanka miisaanka lumay miisaankiisu wuxuu u dhigmaa lipaz inhibitor wuxuuna si toos ah uga shaqeeyaa habka dheef-shiidka halkaasoo uu ka joojinayo ficilka lafa-daboolista lipolytic oo la yiraahdo lipase. Dareemahaasi waa waxa uu jidhku u isticmaalo si uu u dheefshiido dufanka. Hase yeeshe, marka daawadan la qaato cuntada, waxay ku xidhan tahay lipases, taas oo ka hor istaagtay inay jabiso dufanka. Dufanka aan la daboolin waxa loo beddelaa saxarada, taas oo keentay kororka dufanka xajinta iyo hoos u dhigidda baruurta. Marka la wada isticmaalo cunto yareeyaal kaloori ah, waxay kaa caawin kartaa hagaajinta miisaanka oo aad u fududeeyso bukaansocodka culus si ay dib ugu noqdaan muuqaal ahaan, taas oo kordhinaysa fursadaha miisaanka guul darrada leh. Isticmaalka habka loo isticmaalo waa isku mid sida orodka hore ee orlistat iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic.
Cetislim marwalba ma ahan mid ku haboon dhammaan bukaanada. Had iyo jeer la tasho bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga ka hor intaadan isticmaalin daawadan haddii aad uur leedahay, naas nuujineysid, iskuday inaad uur qaaddo, isticmaasho daawooyin kale (dawooyinka rijeetada ama rijeetada aan rijeetada qorin), adoo isticmaalaya wax kasta oo geedo ah ama dheeri ah, ama haddii aad qabto xasaasiyad ama caafimaad kale dhibaatooyinka.
Qiyaasta saxda ah ee budada iyo rijeetada ayaa badanaa ku xiran bukaanka iyo xaaladda la daaweynayo. Ha isku hagaajinin qiyaastaada adiga oo aan oggolaanin bixiyaha xanaanada caafimaadkaaga. Waxyaabahaas ayaa kaliya loogu talagalay isticmaalka sida loo qorey lana faray.
Cetilistat Pow Powder
Cetilistat (Oblean) Suuq-geynta Ganacsiga
Miyuu Cetilistat (Oblean) ka sameysan yahay budada kale?
Bukaannada daaweynaya buurnaanta leh budada Cetislim ayaa laga yaabaa in ay waxyeelo soo gaadhaan. Waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga haddii ay tani dhacdo. Qaar ka mid ah tusaalooyinka halkan ayaa la bixiyaa
Sida loo soo iibsado budada loo isticmaalo: iibso budada Cetilistat laga bilaabo AASraw
1.To nagula soo xiriir naga soo waca nidaamkayaga baaritaanka emailka, ama wakiilka adeegga macaamiisha skype (CSR).